NgokukaGurman, okwangoku asizukubane sizukulwana sesibini seAirPod Max | IPhone iindaba
Umdala uMark GurmanUcacise ngolwesiHlanu odlulileyo kwimithombo yeendaba edumileyo yaseBloomberg ukuba ngekhe sibe nesizukulwane sesibini seAirPod Max, ewe, kubonakala ngathi iApple iyakuthathela ingqalelo ukhetho lokumilisela imodeli efanayo yeefowuni kodwa ngemibala engaphezulu.
MacRumors uziphindile iindaba ngolwesiHlanu odlulileyo ngomzuzu wokugqibela kwaye yonke into ibonisa ukuba ubuncinci okwangoku abasebenzi ekwenzeni ii-headphone zesizukulwana sesibini kwezi AirPods Max. Khumbula ukuba ii-AirPods Max zazisungulwa ngoDisemba ophelileyo we-2020, zintsha kwintengiso kodwa kuyamangalisa ukuba isizukulwana sesibini asikasetyenzwa awucingi ...
Inokwenzeka into yokuba ngexeshana elifutshane utyikityo Cinga ngokusungula le modeli inye kunye nezinto ezifanayo kunye noyilo kodwa ukongeza imibala ngakumbi kwezo sele zikhona kwaye yinto esele iyenzile kuluhlu lwayo lwe-iPad Air kwaye kutsha nje ngeMac entsha. Kwimeko yee-AirPods Max okwangoku akukho zindlebe malunga nezinto ezinqabileyo kumacandelo akwimixokelelwane yemveliso okanye nantoni na efana nayo.
Isitokhwe sizinzile iintsuku ezininzi
Kwaye abo bathatha imveliso ukusukela kusuku lokuqala lokusungulwa baya kwazi ukuba kwakunzima ukuthenga i-AirPods Max ngaphandle kokulinda iinyanga ezininzi ukuyifumana. Ngale ndlela I-Apple sele inesitokhwe sosuku olulandelayo xa kuthengwa kwi-Intanethi, nokuba kungokuqokelelwa kwangolo suku kwiivenkile ezisemthethweni kwihlabathi liphela. Ixabiso elizweni lethu kwezi headphone ze- € 629 kwaye njengoko sisitsho ukuba nabani na angakwazi ukufikelela kuzo ngoku ngaphandle kokulinda iiveki de bafike ezandleni zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » NgokukaGurman, okwangoku asizukufumana isizukulwana sesibini seAirPod Max
I-WhatApp ibuyela umva, ayisayi kuphinda inciphise imisebenzi kubasebenzisi abangawamkeli umgaqo-nkqubo omtsha wabucala